အစကောငျးခဲပမေယျ့ အဆုံးသတျတှဟော နာကငျြစရာ … - ONE DAILY MEDIA
အစကောငျးမှ အနှောငျးသခြောတယျတဲ့ … ကြှနျမအခဈြရေးတှရေဲ့အစမှာလေ ကြှနျမကိုယျကြှနျမ သိပျကိုကံကောငျးလှပွီးထငျနခေဲ့တာ .. ဘယျတော့မှ မထားပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိတှေ အကွိမျကွိမျပေးပွီး တဖှဖှ ခဈြတယျပွောတတျတဲ့ လူတဈယောကျ ကိုယျ့ကို သညျးသညျးလှုပျ ဂရုစိုကျနခေဲ့တာလေ …
မကျြနှာလေးမြားပကျြရငျ ဘာဖွဈတာလဲ အမောတကော ရောကျလာတတျသေးတာ ဗိုကျနာသလား ရဆောသလား စတဲ့ အသေးအမှားတှကေအစ ဂရုတစိုကျရှိလှတဲ့သူ့ကို တဈသကျလုံးအတှကျ ဆိုပွီး အိပျမကျတှေ မကျနခေဲ့မိတာ … သူ့နဲ့ ခဈြနတေုနျးကလေ ကိုယျ့မိဘတှကေအစ အသိပေးပွီး ဒီတဈယောကျနဲ့ အိုမငျးရပါလို၏ဆိုတဲ့ ဆုတှတေောငျးခဲ့တာ …
ကြှနျမဟာ ရှငျ့အတှကျ တဈဦးတညျးသော လူဆို … ကြှနျမကို ဘယျတော့မှ ထားမသှားဘူးဆို … ကြှနျမ မကျြရညျကရြငျ မပွောနဲ့ မကျြနှာလေးပကျြရငျတောငျ မနတေတျဘူးဆို …ဘယျတော့မှ မငိုစရေဘူးဆိုတဲ့ လူက အခုတော့ ကြှနျမမဟုတျတဲ့ တခွားတဈယောကျနဲ့ အခဈြတှကေို အဆုံးသတျသှားတယျ သူနဲ့အတူဆိုပွီး အိပျမကျတှေ အမြားကွီး မကျခဲ့တဲ့ ကြှနျမမှာ အဲ့ဒီအိပျမကျတှကေို ပွနျဆကျခငျြနတေုနျးပဲ …
နှဈယောကျအတူဆိုပွီး မြှျောလငျ့ခဲ့ရတဲ့ ဘဝလမျးတှမှော ကိုယျတဈယောကျတညျးကနျြခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အသိတှေ ရှိပမေယျ့ ငါတဈယောကျတညျးပါလားဆိုပွီး လကျခံလိုကျဖို့ သတ်တိတှမေဲ့နသေေးတယျ … နတှေ့ေ ညတှတေိုငျး စကားတှေ ပွောနတော အကငျြ့ဖွဈနပွေီးမှ ဘာစာမှမလာ ဘာအသံမှမကွားပဲ အဆကျအသှယျတှေ တိကနဲ ဖွတျခံလိုကျရခွငျးတှမှော နသေားမကသြေးဘူး
ခုလကျရှိအဖွဈအပကျြတှဟော အိပျမကျဆိုရငျ ကြှနျမ နိုးထလိုကျခငျြပွီ .. ဆကျပွီးနာကငျြနရေတဲ့ဒဏျကို မခံနိုငျတော့ဘူး … ပွနျလာနိုးနိုး ချေါလာနိုးနိုးနဲ့ မြှျောနရေတဲ့ရကျတှဟော သူမရှိတော့ကတညျးကဆိုရငျ ခုဆို အတေျာ့ကို ကွာပွီလေ… အစတှကေောငျးရငျ အနှောငျးသခြောသတဲ့ … အစကတော့ သူကြှနျမကို သိပျခဈြပွခဲ့တာပါပဲ ..
ဒါပမေယျ့ အဆုံးသတျတှကေတော့ တခွားတဈယောကျနဲ့ ဆုံးတယျ. … ပွီးတော့ ကြှနျမကို အိပျမကျတှကွေားမှာ ခနျြထားပွီး နာကငျြစရေုံသကျသကျပါ
အစကောင်းခဲပေမယ့် အဆုံးသတ်တွေဟာ နာကျင်စရာ …
အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာတယ်တဲ့ … ကျွန်မအချစ်ရေးတွေရဲ့အစမှာလေ ကျွန်မကိုယ်ကျွန်မ သိပ်ကိုကံကောင်းလှပြီးထင်နေခဲ့တာ .. ဘယ်တော့မှ မထားပါဘူးဆိုတဲ့ ကတိတွေ အကြိမ်ကြိမ်ပေးပြီး တဖွဖွ ချစ်တယ်ပြောတတ်တဲ့ လူတစ်ယောက် ကိုယ့်ကို သည်းသည်းလှုပ် ဂရုစိုက်နေခဲ့တာလေ …
မျက်နှာလေးများပျက်ရင် ဘာဖြစ်တာလဲ အမောတကော ရောက်လာတတ်သေးတာ ဗိုက်နာသလား ရေဆာသလား စတဲ့ အသေးအမွှားတွေကအစ ဂရုတစိုက်ရှိလှတဲ့သူ့ကို တစ်သက်လုံးအတွက် ဆိုပြီး အိပ်မက်တွေ မက်နေခဲ့မိတာ … သူ့နဲ့ ချစ်နေတုန်းကလေ ကိုယ့်မိဘတွေကအစ အသိပေးပြီး ဒီတစ်ယောက်နဲ့ အိုမင်းရပါလို၏ဆိုတဲ့ ဆုတွေတောင်းခဲ့တာ …
ကျွန်မဟာ ရှင့်အတွက် တစ်ဦးတည်းသော လူဆို … ကျွန်မကို ဘယ်တော့မှ ထားမသွားဘူးဆို … ကျွန်မ မျက်ရည်ကျရင် မပြောနဲ့ မျက်နှာလေးပျက်ရင်တောင် မနေတတ်ဘူးဆို …ဘယ်တော့မှ မငိုစေရဘူးဆိုတဲ့ လူက အခုတော့ ကျွန်မမဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ အချစ်တွေကို အဆုံးသတ်သွားတယ် သူနဲ့အတူဆိုပြီး အိပ်မက်တွေ အများကြီး မက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မမှာ အဲ့ဒီအိပ်မက်တွေကို ပြန်ဆက်ချင်နေတုန်းပဲ …
နှစ်ယောက်အတူဆိုပြီး မျှော်လင့်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀လမ်းတွေမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့ပါလားဆိုတဲ့အသိတွေ ရှိပေမယ့် ငါတစ်ယောက်တည်းပါလားဆိုပြီး လက်ခံလိုက်ဖို့ သတ္တိတွေမဲ့နေသေးတယ် … နေ့တွေ ညတွေတိုင်း စကားတွေ ပြောနေတာ အကျင့်ဖြစ်နေပြီးမှ ဘာစာမှမလာ ဘာအသံမှမကြားပဲ အဆက်အသွယ်တွေ တိကနဲ ဖြတ်ခံလိုက်ရခြင်းတွေမှာ နေသားမကျသေးဘူး
ခုလက်ရှိအဖြစ်အပျက်တွေဟာ အိပ်မက်ဆိုရင် ကျွန်မ နိုးထလိုက်ချင်ပြီ .. ဆက်ပြီးနာကျင်နေရတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်တော့ဘူး … ပြန်လာနိုးနိုး ခေါ်လာနိုးနိုးနဲ့ မျှော်နေရတဲ့ရက်တွေဟာ သူမရှိတော့ကတည်းကဆိုရင် ခုဆို အတော့်ကို ကြာပြီိလေ… အစတွေကောင်းရင် အနှောင်းသေချာသတဲ့ … အစကတော့ သူကျွန်မကို သိပ်ချစ်ပြခဲ့တာပါပဲ ..
ဒါပေမယ့် အဆုံးသတ်တွေကတော့ တခြားတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံးတယ်. … ပြီးတော့ ကျွန်မကို အိပ်မက်တွေကြားမှာ ချန်ထားပြီး နာကျင်စေရုံသက်သက်ပါ ။